घाइते खनियाँबास गाउँपालिका अध्यक्षको बयान : ‘बेलुका ८ बजेतिर पेस्तोल पड्कियो’ | Diyopost - ओझेलको खबर घाइते खनियाँबास गाउँपालिका अध्यक्षको बयान : ‘बेलुका ८ बजेतिर पेस्तोल पड्कियो’ | Diyopost - ओझेलको खबर
घाइते खनियाँबास गाउँपालिका अध्यक्षको बयान : ‘बेलुका ८ बजेतिर पेस्तोल पड्कियो’
दियो पोस्ट बुधबार, चैत्र २३, २०७८ | १०:३७:५५
धादिङ । वडाध्यक्षको टिकटको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा नेपाली कांग्रेस धादिङको खनियाँबास गाउँपालिकामा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । मंगलबार राती दुई पक्षबीचको विवादले उग्ररुप लिँदा गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका रणबहादुर तामाङमाथि आक्रमण भएको छ । आक्रमणबाट अध्यक्ष तामाङ घाइते भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको पूर्व क्षेत्रिय सभापति राजु पाख्रिनको समुहले उनीमाथि आक्रमण गरेको हो । आक्रमणको पहिलो सुचना दियोपोस्टले ब्रेक गरेको थियो ।
घटनाबारे कांग्रेस नेता तथा खनियाबास गाउँपालिका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङले दियोपोस्टलाई टेलिफोनमै दिएको बयान अनुसार पाख्रिन समुहले वडाध्यक्षको टिकटको विषयमा विवाद भएपछि पस्तोल पड्काएको थियो । यस्तो छ रणबहादुर तामाङले दिएको बयान ।
राजु पाख्रिन भन्ने हाम्रो नेता हो । उहाँ पहिले क्षेत्र नम्बर १ को भूतपूर्व सभापति हो । उहाँले वितण्डा मच्चाउनु भयो । कांग्रेसको वडाध्यक्षको टिकटलाई लिएर विवाद शुरु भएको हो । ७ जना वडाध्यक्षको दाबेदार हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले ६ जना कसैलाई पनि बनाउन नदिने लिला पाख्रिन भन्नेलाई मात्रै टिकट दिनुपर्छ भनेर अडान लिनु भयो । लिला उहाँको भाञ्जा पनि हो । त्यही विषयमा उहाँले वितण्डा मच्चाउनु भयो । हामीले बैठक स्थगित गरौँ भनेर बहिष्कार गरौँ भनेर आयौँ । हामी आएपछि उहाँले वडा सचिव र सभापतिलाई जबरजस्ती गरेर निर्णय गर्न लगाएछन् । उपसभापति र सचिवको रोहभरमा अरु कसैको सिग्नेचर बिना निर्णय गरिएछ । वडाध्यक्षमा पाख्रिनलाई नै सिफारिस गरिएछ । ठीकै उहाँहरुले जेसुकै गरोस् भनेर हामी चुपो लागेर बस्यौँ । ८ बजेतिर पेस्तोल पड्कीयो । त्यसपछि पनि हामी ठिकै छ भनेर बस्यौँ । हामी २५/ ३० जना खाई पिई बसेका थियौँ । वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । झार्लाङबाट २ जना भाईहरु आएका थिए । उनीहरुलाई भेट्न म गएको थिएँ । तल राजु पाख्रिन र धन बहादुर वाइवा बसेर केही छलफल गरिरहेका थिए । त्यसपछि हामीबीच केही भनाभन भयो । कसले पेस्तोल पड्काएको प्रमाण देखा भनेर हामीसँग राजु पाख्रिनले निहुँ खोज्यो । त्यसपछि ममाथि बाटुकोले प्रहार गरियो । मलाई चोट लागेको छ । म अहिले घरमै छौँ । हामी २५÷३० जना छौँ । भोली मैले मुद्दा हाल्छु । ममाथि आक्रमण हुनुभन्दा एक घण्टा अघि पेस्तोल पड्कीएको हो । म भोली पेस्तोल पड्काउनेहरु विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरीमा दिनेछु । हामी पार्टी भित्र आतंक किन मच्चाउने ? गुण्डागर्दी प्रयोग गरेर हामीलाई पार्टी बनाउनु छैन ।
बुधबार, चैत्र २३, २०७८ | १०:३७:५५
२५ वर्षदेखि एमालेको ‘लालकिल्ला’ बुटवल : दुई…
राखेपका पूर्व सदस्य सचिव विष्ट १४ हजार…
धनगढीमा काठमाडौंबाट टिकट लिएर गएका नृप ओडको…
नर्भिक अस्पतालका डा. जेपि जयसवालले विवाहको प्रलोभन…
पूर्व मिस नेपाल माल्बिका सुब्बालाई पनि ‘नियन्त्रण’मा…
२५ वर्षदेखि एमालेको ‘लालकिल्ला’ बुटवल : दुई नेताको द्वन्दका कारण लज्जास्पद हार !
राखेपका पूर्व सदस्य सचिव विष्ट १४ हजार मतान्तरले पराजित भएपछि छोरा लगाएर एमाले नेतामाथि कुटपीट
धनगढीमा काठमाडौंबाट टिकट लिएर गएका नृप ओडको लज्जास्पद हार, स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालले पाए दोब्बर बढी मत
नर्भिक अस्पतालका डा. जेपि जयसवालले विवाहको प्रलोभन देखाएर ‘बलात्कार गरेको’ खुलाशा !
राखेपका पूर्व सदस्य सचिव विष्ट १४ हजार मतान्तरले पराजित भएपछि…
धनगढीमा काठमाडौंबाट टिकट लिएर गएका नृप ओडको लज्जास्पद हार, स्वतन्त्र…
नर्भिक अस्पतालका डा. जेपि जयसवालले विवाहको प्रलोभन देखाएर ‘बलात्कार गरेको’…
पूर्व मिस नेपाल माल्बिका सुब्बालाई पनि ‘नियन्त्रण’मा लिने प्रहरीको तयारी…
भरतपुरमा रेनु दाहाल ६१३८ मतले अगाडी, जगन्नाथले कटाए १० हजार…